AC Sensor hadda
DC Sensor hadda
Qalabka danab ee AC
Qalabka Danab DC
Saamaynta Hoolka Saamaynta Hadda
Fur Loop Hall Saameynta Saameraha Hadda
Saameynta Loop Hall Saameynta Saameraha Hadda
Sensor Conditioner Signal
Sensor Soo noqnoqda
Shan tilmaam si dareenka looga dhigo mid fudud
Talada 1 - Ka bilow aaladda baska Tallaabada ugu horreysa, injineerku waa inuu qaataa waqtiga ugu horreeya ee uu ku xirmo dareeraha iyadoo la adeegsanayo aaladda baska si loo xadido waxyaabaha aan la aqoon. Qalabka basku wuxuu ku xiraa kumbuyuutar shaqsiyeed (PC) aaladda dareemayaasha 'I2C', 'SPI' ama borotokollo kale oo u oggolaanaya dareeyuhu inuu 't ...
Tirada dareemayaasha ayaa kor uga kacay guud ahaan dhulka iyo nolosha dadka, iyagoo bixinaya farriimo kala duwan oo xog ah oo adduunka oo dhan ah. Dareemayaashaan qiimaha-saaxiibtinimada leh ayaa ah xoogga dhaqaajiya horumarka Internetka Waxyaabaha (IoT) bulshadeenuna waxay wajaheysaa dib u habeyn dijitaal ah ...
Sensor aqoon waxbarasho aasaasi ah (6)
Xasaasiyadda Dareenka Dareenka xasaasiga ahi wuxuu loola jeedaa saamiga isbeddelka wax soo saarka Δ y ee isbeddelka gelinta Δ x ee hawlgalka joogtada ah ee dareeraha. Waa jiirada qallooca astaamaha wax soo saarka-soo-gelinta. Dareenka S waa mid joogto ah haddii uu jiro xiriir qumman oo u dhexeeya dareemaha ...
Sensor aqoonta aasaasiga ah ee tababarka (5)
Xariiqa Sensor Caadi ahaan, soosaarka astaamaha dhabta ah ee muuqaalka dareemayaasha ayaa ah qalooc bar halkii uu ka noqon lahaa xariiq toosan. Shaqada dhabta ah, si mitirku u yeesho akhrinta miisaanka oo isku mid ah, xariijin toosan oo toosan ayaa badanaa loo isticmaalaa inuu matalo qalooca astaamaha dhabta ah, iyo lin ...
Sensor aqoon waxbarasho aasaasi ah (4)
Dhaqdhaqaaqa dareemayaasha Astaamaha loogu yeero firfircoonida firfircoon waxaa loola jeedaa astaamaha soo saarida dareeraha marka soo gelintu isbeddeleyso. Ficil ahaan, astaamaha firfircoon ee dareemayaasha ayaa badanaa lagu muujiyaa jawaabta ay ka bixiyaan calaamadaha caadiga ah ee la gelinayo. Tani waa sababta oo ah sensorR ...
Sensor aqoon waxbarasho aasaasi ah (3)
Sifooyinka astaamaha ee dareemayaasha Sifooyinka astaamaha dareemayaasha waxay la xiriiraan signalka guurista ee joogtada ah, soo saaraha dareeraha iyo gelinta. Maaddaama soo-gelinta iyo soo-saarku ay u madax-bannaan yihiin waqtiga xilligan, xiriirka ka dhexeeya, taas oo ah, astaamaha ma guurtada ah ee ...
Sensor aqoonta casharka aasaasiga ah (2)
Kala soocista dareeraha Waqtigan xaadirka ah, ma jiro qaab kala sooc midaysan oo loogu talagalay dareemayaasha, laakiin saddexda nooc ee soo socda ayaa badanaa la isticmaalaa: 1. Marka loo eego tirada jirka ee dareemayaasha, waxaa loo qaybin karaa dareemayaal sida barokac, xoog, xawaare, heerkul, socodka, iyo halabuurka gaaska ....
Sensor aqoon waxbarasho aasaasi ah
Aqoonsiga aasaasiga ah ee cashar barashada Sensor qeexida Heerka Qaranka ee GB7665-87 wuxuu qeexayaa dareeraha: "Qalab ama aalad la cabbiri karo loona rogi karo calaamado la adeegsan karo iyadoo loo eegayo qaanuun gaar ah, oo badanaa ka kooban waxyaabo xasaasi ah iyo qaybaha beddelka". Dareemuhu waa qalab lagu baaro ...
Hordhaca ereybixinta guud ee dareemayaasha (6)
26. Qiyaasta caadiga ah Marka aysan jirin wax iska caabin ah, xorriyadda dareemaha (ma jiraan xoog dibadda ah) ayaa qiyaasta sicirka. 27. Jawaab: Sifada lagu cabiro lana bedelo waqtiga wax soo saarka. 28. Qiyaasta heerkulka magdhawga Waxay u oggolaaneysaa dareemayaasha inuu ilaaliyo kala duwanaanta heerkulka.
Hordhaca ereybixinta guud ee dareemayaasha (5)
20. Baadhitaanka xasaasiyadda Isbeddel ku yimaadda foorashada xariiqa qallooca sababo la xiriira isbeddel xagga dareenka ah. 21. Diiranaanta xaragada kulaylka Dhimashada xasaasiga ah waxaa ugu wacan isbeddelada xasaasiga ah. 22. Dabiicista eber ee kuleylka ah Zero leexasho sababo la xiriira isbeddelada kuleylka. 23. Linearity Heerka ay ...
Hordhaca ereybixinta guud ee dareemayaasha (4)
Waxaa qoray admin on 21-06-08
14. Soo saar Eber Xaaladaha magaalada, soo saarida dareeraha waxaa lagu cabiraa eber. 15. Lag Kala duwanaanta ugu badan ee ku dhacda wax soo saarka marka qiimaha la qiyaasay uu kordho oo uu hoos u dhaco marka loo eego baaxadda cayiman. 16. Daahida Waqtiga dib u dhaca isbeddelka ku yimaadda calaamadda wax soo saarka ee qaraabada t ...
Hordhaca ereybixinta guud ee dareemayaasha (3)
8. Mawqifka Eberka Xaaladda qiimaynta wax-soo-saarka oo dhan la yareeyo, sida xaalad isu-dheellitiran. 9. Dhiirrigelinta tamarta Dibadda (danab ama hadda) oo la marsiiyey si dareeyuhu si sax ah u shaqeeyo. 10. Dhiirrigelinta ugu badan Qiimaha ugu sarreeya ee danab kiciyaha ama kan hadda socon kara ee ...
Maya 98 Wadada Bariga Youxian, Degmada Youxian, Mianyang 621000, Shiinaha
Saamaynta Hoolka Saamaynta Hadda, Hall Sensor hadda, Hall Saamaynta Ac Sensor-ka Hadda, Danab Sensor hadda, Isticmaalka Awoodda Hoose Dc Sensor-ka Haatan, Xaqiijinta Sare Ac sensor Sensor,